Vagadziri vemotokari - China Automobile Fekitori & vanotengesa
Yakagadziriswa chigadzirwa kutengesa
Kofi muchina zvikamu
Fan rekumashure kavha
Tembiricha yekuyera mudziyo
Iine PCBA ndiro inokwira chikamu
✭ Ichi chikamu chepurasitiki ndicho chikamu chikuru cheDhijitari Charge uye Charge Connector yepasi pabutiro.
✭Iwo iwo anoshandiswa echikamu chepurasitiki ichi ABS isina moto Zvishandiso, Ichi chikamu chepurasitiki chikamu chekuonekwa chechigadzirwa uye chakakosha gungano chikamu. Iyo yakasungirirwa yakanamatira kune yepakati goko ine 6 yendarira nzungu, uye inoda kupasa iyo 5-mita donhwe bvunzo.
✭Iyi ABS isina moto zvinhu yasvika padanho reV0, ichiita kuchengetedza uye kugadzikana panguva yekuchaja-bhodhi. Iyo purasitiki muforoma yeichi chikamu chepurasitiki chinoitwa neye matatu-ndiro chakuvhuvhu. inotonhora mumhanyi ari pakati poindi, mukana uyu unogona kuita kuti chigadzirwa chigadzirwa jekiseni zvakafanana uye kwete nyore akaremara.
✭Iyi seti yejekiseni inoumba, yedu dhizaini hupenyu ndeye 500,000 nguva. Iyo yekugadzirisa pakati pezvigadzirwa yakagadzirirwa neakawedzererwa mhangura nzungu. Iyo yemhangura nzungu inoiswa muforoma uye ndokubayiwa jekiseni. Izvi zvinoona kuti nati yemhangura inogona kusimbiswa zvakanyanya kuchikamu chepurasitiki.
✭Kana uine zvigadzirwa zvakafanana, Ndapota usazeza kutisangana nesu. Tichava shamwari yako yepamoyo.
✭ Ichi chikamu chepurasitiki chakanamwa mukati memotokari, uchishandisa tembiricha yakakwira uye kutonhora kusagadzikana PA66 + 30% epurasitiki zvinhu. Iyo yekushanda nharaunda tembiricha yechikamu ichi iri pakati -40 uye +100 madhigirii. Iyo inopokana nemamiriro ekunze ekunze uye inosangana neVolkswagen's 50185 standard.
✭ Iyi epurasitiki chikamu chikamu cheMafuta mafirita epurasitiki maccessories kubva kuGerman mutengi. Iko kunetsekana kukuru kwechikamu ichi ndechekuti ukobvu hwayo hwemadziro ingori 0.45mm chete. Iyi seti yeforoma inotora iyo HASCO standard. Iyo Core zvinhu ndeye 1.2343 (ESR) yakaoma simbi.
✭ Chimiro chichiumbwa chiri nyore, iine mbiri Becu yepakati inoisa zvivakwa. Icho chigadzirwa chigadzirwa iAP6 + 30GF, uye pamusoro panofanirwa kuve VDI-24. Kukura kwechigadzirwa chinodiwa +/- 0.05. Iyo nguva yekuendesa ndiyo mazuva makumi mashanu, uye jekiseni iri masekondi gumi nemaviri. Iyo fomu yakaedzwa kaviri chete, uye mutengi akatikumbira kuronga kutumira kunze kuGerman jekiseni kuumbwa fekitori.
✭ Ichi chikamu cheAngle buffer yepurasitiki yeVolkswagen, ichishandisa kupisa kwakanyanya uye kutonhora kusagadzikana PA66 + 30% epurasitiki zvinhu. Iyo yekushanda nharaunda tembiricha yechikamu ichi iri pakati -40 uye +150 degrees. Iyo inopokana nemamiriro ekunze ekunze uye inosangana neVolkswagen's 50185 standard.
✭ Ichi chigadzirwa chinoshandiswa munzvimbo yekutsigira yemota zvikamu kuti zvimwe zvikamu zvemota zvigadzikane uye zvakavimbika. Iyi seti yeforoma inotora iyo HASCO standard. Iyo Core zvinhu ndeye 1.2344 (ESR) yakaoma simbi.
✭ Chimiro chichiumbwa chiri nyore, iine mbiri Becu yepakati inoisa zvivakwa. Icho chigadzirwa chigadzirwa iAP6 + 30GF, uye pamusoro panofanirwa kuve VDI-21. Kukura kwechigadzirwa chinodiwa +/- 0.05. Iyo nguva yekuendesa ndiyo mazuva makumi matatu, uye jekiseni iri masekondi makumi matatu. Iyo fosi inoshandisa INCOE mumhanyi anopisa mumhanyi anotonhora weiyo sub gate. Iyo fomu yakaedzwa kaviri chete, uye mutengi akatikumbira kuronga kutumira kunze kuGerman jekiseni kuumbwa fekitori.
✭ Ichi chikamu chepurasitiki chikamu chemotokari kubva kumutengi weFrance. Iyi seti yeforoma inotora iyo HASCO standard. Iyo Core zvinhu ndeye 1.2343 (ESR) yakaoma simbi.
✭ Chimiro chimiro chisinganetsi, chine maviri maLifter zvimiro Icho chigadzirwa chigadzirwa iAP66 + 30GF, uye pamusoro pacho panoda kukwenenzverwa # 600. Iyo mold de
nguva yekutora mazuva makumi matatu nemashanu, uye iyo jekiseni kutenderera i32 masekondi. Iyo fomu yakaedzwa kaviri chete, uye mutengi akatikumbira kuronga kutumira kunze kune iyo French jekiseni jekiseni kuumbwa fekitori.
✭ Iyo firita midhiya inogadzirwa nemutengi mizhinji-yakatetepa macomputer akagadzirwa kubva kune fiber girazi kana zvigadzirwa zvekugadzira izvo zvinobvumidza kusangana kwakaringana nemafuta bio uye kabhoni zvimedu zvakanyungudutswa mumafuta. Ivo vanovimbisa yepamusoro mota mashandiro kunyangwe paine kuiswa kweiyo nyowani «hupenyu hwakareba» maoiri, zvinowedzerwa, zvicherwa uye zvisiri zvemaminerari mafuta uye kwavo kunokanganisa kudzikisira. Maumbirwo etsva uye echinyakare firita midhiya inovimbisa yakakwira kubvumidzwa uye nekudaro diki mutoro kurasikirwa mune injini girisi system.
✭ Ichi chikamu chepurasitiki chikamu cheOiri mafirita epurasitiki maccessories kubva kumutengi weItari. Iyi seti yeforoma inotora iyo HASCO standard. Iyo Core zvinhu ndeye 1.2344 (ESR) yakaoma simbi. Chimiro chichiumbwa chiri nyore, iine ina yakazvimirira yepakati inoisa zvivakwa. Icho chigadzirwa chigadzirwa iAP6 + 30GF, uye pamusoro panofanirwa kuve VDI-33. Iyo nguva yekuendesa ndiyo mazuva makumi mana, uye jekiseni iri masekondi makumi matatu nemasere. Iyo fomu yakaedzwa kaviri chete, uye mutengi akatikumbira kuronga kutumira kunze kuItari jekiseni kuumbwa fekitori.